[IMIBONO] Kuyadida okwenzeka kwiThe Queen | Isolezwe
[IMIBONO] Kuyadida okwenzeka kwiThe Queen
ezemisakazo / 27 November 2018, 5:56pm / MCEBO MPUNGOSE
UMLOBI ukhala ngokungashayi khona kwezinye zezinto umdlalo iThe Queen yakuMzansi Magic ozenzayo. Esithombeni umlingisi oqavile kwiThe Queen, uConnie Ferguson odlala indawo kaHarriet Khoza.
AKUKHO ukungabaza ukuthi uma kukhulunywa ngemidlalo yethelevishini ephambili njengamanje evela kuMzansi Magic, iThe Queen iyona ebalwa phambili.
Lesi siteshi siqukethe imidlalo okubalwa kuyo Isibaya, The Queen, Isithembiso, Lockdown, The Throne neminye. Engifisa ukugxila kuwo namhlanje iThe Queen, okuwumdlalo ogxile emndenini wakwaKhoza oshushumbisa izidakamizwa endaweni yaseTembisa.
Kunesisho esivamile ngendawo yobumnandi eMlaza, iYadini Lounge, esifishane esithi nje ‘Iyadi lizokumangaza’. Sengiqala ukuba nombono ofanayo ngalo mdlalo. Izokumangaza iThe Queen.
Ukuxwaya kwami ngalo mdlalo kuqale kufika uKamina (Michelle Mosalakae), uBrutus Khoza (Themba Ndaba) obembiza ngoKalamina.
Ukufika kwakhe kwaba yisidididi esingaqondakali kusukela ekuqaleni ekhuluma ngokufunwa uthuli amadelakufa asezweni lakhe eDRC.
Luthe luhamba udaba kwagcina sekuvela ukuthi uKamina watholwa uDiamond, oyisitha esikhulu somndeni wakwaKhoza njengamanje. Umthola kanjani uDiamond uKalamina, ekubeni kade ejahana nabantu bakwaKhoza waze wadutshulwa walimala?
Waze ngani ukuthi uKalamina wayethandana noKagiso Khoza (Loyiso MacDonald) ngesikhathi ejutshwe eDRC esayisosha?
Asidlule lapho ukuze siqhubekele phambili.
Asike sithi uDiamond (Zolisa Xaluva) isigebengu esinemali yonke esiyisebenzisa ukuthola lonke ulwazi esiludingayo ngabantu bakwaKhoza.
Usetholile ngoKamina, bahlanganisa icebo lokuthi azisondeze noKagiso, amazise ngengane bese kuba nomshado lapho bezofika kuvuthondaba wecebo labo lokubophisa abakwaKhoza.
Ngizibuzela nje, kulokhu ababhali bebengeke bazame ukuhlanganisai uvuthondaba nomshado?
Ake sibuyekeze imishado yeThe Queen. Singabala okaBrutus noHarriet (Connie Ferguson), wabhuntsha. OkaShaka noLinda (Celeste Khumalo) nawo ongaphelanga kahle kutheleka uDiamond wavulela inganono.
Sisekuye uShaka, umshado wakhe noMabatho esikebheni nawo waphazamiseka kutheleka uDiamond wabulala umshana wakhe kunabantu ayehlose ukubabulala.
Omunye umshado ohlangene novuthondaba kwaba ngokaJerry noVuyiswa lapho okwavela khona ukuthi uVuyiswa ubethandana nendodana kaJerry, uBakang.
Zonke izigameko zakwaKhoza zenzeka uma kushadwa.
Nakulokhu kwakamuva kuze kubulawa uKamina nje kwenzeke emshadweni. Sicela okuhlukile.
Ngaphambi kokuthi ngikhohlwe ukuthi bengikhuluma ngani, asibuyele ezimangeni zalo mdlalo.
Emasontweni ambalwa edlule uKamina wabanjwa ukuthi usebenzisana noDiamond. Ubanjwa umngani kaKagiso, uTrevor.
Uma uTrevor eseyomceba, umkhiphela ummese amgwaze khona endlini, bese ejika udaba athi umbambile ukuthi usebenzisana noDiamond. Okokuqala nje kunamadoda ahlale ephethe izibhamu eyaluza egcekeni kwaKhoza.
Ayeseshonephi kwenzeka lesi sigameko? Kungani abakwaKhoza bengenawo amakhamera emzini wabo?
Bavele bakholwa kalula uKamina ngoTrevor, bakholwa bonke ngaphandle kokungabaza nokubuza ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi umngani kaKagiso ubesebenzisana noDiamond sonke lesi sikhathi?
Esinye isidididi engingasiqondanga wukungena kwamaphoyisa emshadweni wakamuva ngemuva kokuzwa ngezidakamizwa.
UVuyiswa wangena wenza umsebenzi wakhe kodwa engakuqaphela ukuthi emshadweni kwakukhona uZack, oyingxenye yeBig 5, kungani esemshadweni wakwaKhoza, abahlezi bewunuka ngokudayisa izidakamizwa?
Angithi uJerry uhanjiswe ukuxabana kwakhe noVuyiswa ngoZack? UZack wayemazisile nje uVuyiswa ngokuhambela lo mshad. Basathandana?
Asazi. Ngisamangele namanje ukuthi akashongo lutho kuZack emshadweni abewusola ngokuba nezidakamizwa ekubeni wayemvikela uma esolwa uJerry.
Abadlali abafika kwiThe Queen bavele babulawe uma sebehamba noma bavele banyamalale nje, singatshelwa lutho ngabo.
Ababhali beThe Queen kuyacaca ukuthi abalwenzi ucwaningo ngezihloko ababhala ngazo njengesithinta imboni yezidakamizwa.
Lapha singabala ubudlelwano kwabahweba ngezidakamizwa nabamphoyisa, abomthetho, umphakathi, abazishushumbisayo, izigqila zezidakamizwa nokushushumbiswa kwemali.
Kungabasiza ukukopela kwiSibaya esikhombisa ukucwaninga ngemboni yamatekisi nezokuthakatha.